Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Hawaii Tourism: Pasent 82 nke ndị ọbịa nwere obi ụtọ na njem ha
Hawaii Tourism: Pasent 82 nke ndị ọbịa nwere obi ụtọ na njem ha
Tupu ha erute n’agwaetiti ndị a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nile zaghachirinụ maara banyere ikike gọọmentị ime obodo na-eme iji gbochie mgbasa nke nje a.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọbịa kwuru na njem ha bụ “Ọmarịcha
Pasent 92 nke ndị ọbịa kwuru na njem ha na Hawaii gabigara ma ọ bụ zute atụmanya ha
Pasent 85 nke ndị zaghachiri na-ekwu na nyocha nnwale tupu ị gafere na-aga nke ọma maka ha
The Ndị njem nleta Hawaii (HTA) weputara nsonaazụ nke nchọpụta nyocha pụrụ iche, nke nyochara ndị ọbịa si na United States bụ ndị gara Hawaii site na February 12 rue February 28, 2021, iji chọpụta ahụmịhe ha na mmemme njem njem njem nke Hawaii yana afọ ojuju njem niile. Nke a na-abịa ọnwa abụọ ka emere ọmụmụ ihe izizi. N'ime ọmụmụ ihe ọhụrụ a, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọbịa (82%) kwuru na njem ha dị ka "Ọmarịcha," pasent 92 kwuru na njem ha karịrị ma ọ bụ zute atụmanya ha. Pasent iri asaa na asatọ nke ndị zaghachiri kwuru na ha ga-atụ aro ileta Hawaii n'ime ọnwa isii na-esote, na ọnụọgụ ahụ rịrị elu na 90 pasent ma ọ bụrụ na e wepụrụ iche iche.
Hawaii's Safe Travels program na-enye ohere ka ọtụtụ ndị njem na-esite na steeti na-agagharị ma na-agagharị na mpaghara iji gafee iwu onwe onye nke ụbọchị 10 iji wepụta ihe mkpuchi COVID-19 NAAT na-adịghị mma site na Onye Mmekọ Ntụle Ntụkwasị Obi A ghaghị ịnwale ule ahụ tupu awa 72 site na nkwụsị ikpeazụ nke ọpụpụ na nsonaazụ ọjọọ ga-enwetara tupu ịpụ na Hawaii. N'ime ọnwa Febụwarị, Kauai County gara n'ihu kwụsịtụ nwa oge na nsonye ya na njem njem nchekwa maka ndị njem trans-Pacific bụ ndị nwere nhọrọ nke isonye na mmemme nnwale tupu na mgbe a na-eme njem na ebe obibi "ebe a na-eme mkpọtụ" dị ka ụzọ iji belata oge ha na kwarantaini.
Ahụmịhe nnwale tupu njem maka ndị ọbịa nwere mmụba dị mma site na isi isii kemgbe ọmụmụ Disemba, yana pasent 85 nke ndị zaghachirinụ na-ekwu na nnwale chọrọ ịga nke ọma maka ha. N'ime ndị gosipụtara na ha nwetara nsogbu na usoro nyocha tupu njem, pasent 51 kwuru na ha chere na windo elekere 72 maka ule bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya, pasent 28 zutere nsogbu ịchọta Onye Mmekọ Ule Tụkwasịrị Obi, pasent 24 kwuru na ọnụ ahịa ule a bụ dị oke elu.
Tupu ha erute n’agwaetiti ndị a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nile zaghachirinụ maara banyere ikike gọọmentị mpaghara ime iji gbochie mgbasa nke nje a nakwa na ụfọdụ azụmaahịa na ebe nkiri dị obere ma ọ bụ na achọrọ ka ha rụọ ọrụ na mbelata ikike.
Nnyocha ahụ jụọ ndị ọbịa ugboro ole ha na-agbaso ụkpụrụ nduzi COVID-19, pasent 90 nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha na-agbaso iwu iwu oge niile ma ọ bụ oge niile, pasent 83 kwuru na ha na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-ewepu oge niile ma ọ bụ oge niile, yana pacenti iri itoolu kwuru na ha zere nnọkọ niile ma ọ bụ ọtụtụ oge.
Ngalaba Nnyocha Njem Nleta nke HTA rụkọrọ ọrụ na Anthology Research iji duzie nyocha intaneti n'etiti Machị 8 na Machị 10, 2021, dịka akụkụ nke nkwekọrịta maka Nleta Afọ Ojuju na Ọrụ.